GetFeedback: Ongororo Dzepamhepo Sezvakamboita | Martech Zone
Kana iwe wakatora ongororo munguva pfupi yapfuura, iwe unoziva kutyisa kweiyo mushandisi maficha ari echinyakare ekuongorora maturusi. Ndiro rimwe rematambudziko ekuva mutungamiri mune tekinoroji - iwe unoramba uchivaka nekubatanidza chikuva chako uye zvinowedzera kuoma kuzvigadzirisa. Ini ndinoramba ndichiona izvi nemapuratifomu akasiyana - uye ndinotenda kunaka kuti zvaitika neongororo. GetFeedback ine inoteerera, WYSIWYG interface iyo inokutendera iwe kuti ugadzire tsvagiridzo dzakanaka
Izvo Zvaunoona ndizvo zvaunowana - Ne GetFeedback iwe unogona kugadzira ako ongororo mukati-mutsara, uye wobva wawedzera maitiro ako nekuwedzera mavara, mafonti, marogo, uye mifananidzo.
Mufananidzo uye Vhidhiyo Rutsigiro - mufananidzo uye vhidhiyo yekushandisa mhedzisiro mukudzika kubatanidzwa (uye yakakwira yekupedzisa mitengo) ne online online ongororo.
wirirana - Kupfuura 50% yeongororo dzako hazvingatariswe muwebhu browser kubva pakombuta kana palaptop. Maturusi emazuvano ekuongorora anofanirwa kugadzirirwa nyika yemafoni emafoni, mapiritsi uye mabhurawuza ewebhu makuru nediki.
Kugovaniswa kwakawanda-chiteshi - kugona kugovera ako ongororo kuburikidza chero chiteshi: email, webhusaiti yako, yako blog, kana zvakananga kuFacebook neTwitter.
Yechokwadi-nguva Kuzivisa - GetFeedback inokuzivisa iwe nezviyeuchidzo zvePush uye unonunura akawanda maturusi ekuongorora kuti uwane zvakanyanya kubva kudhata rako.
Kugovana Dhata - Goverana zvabuda zvako ipapo ipapo nevamwe vaunoshanda navo kuitira kuti timu yese ione mhinduro, kana kurodha pasi uye kutumira data rako kuExcel kana CSV.
GetFeedback Mitengo inotanga pasina muripo uye inoenderana nekushandiswa. Zvikwereti zvinopihwa zvegore kubhadhara.
Tags: mhinduro yemutengisarudzo dzevatengivatengi ongororozvaunofungamusarudzosurvey
Nharembozha Email Chinyorwa Mutsetse Unoratidza